समाचार - फलाम बाड़ मर्मत विधि
सामान्यतया बोल्ने, निर्माता फलाम बाड़ को उत्पादन प्रक्रिया को दौरान बाहिरी वातावरण को विशेषताहरु लाई विचार गरीएको छ। सामग्री र कोटिंग्स को चयन मा, उनीहरु विरोधी जंग, पहनने प्रतिरोध, जंग प्रतिरोध, र विरोधी जोखिम प्राप्त गर्न को लागी प्रयास, त्यसैले प्रयोगकर्ताहरु मात्र खरीद गर्न को लागी प्रसिद्ध निर्माताहरु को लागी जब फलाम बाड़ को उपयोग गरी हेर्नुहोस्। घटिया गुणस्तर को केहि फलाम सुविधाहरु किन्न को लागी लालची नहुनुहोस्। आदेश मा बाहिरी wrought फलाम सुविधाहरु को जीवन को विस्तार गर्न को लागी, निम्न बिन्दुहरु पनि हासिल गर्नु पर्छ:
1. बाधाहरु बाट बच्नुहोस्।
यो गढेको फलाम उत्पादनहरु को बारे मा नोटिस गर्न को लागी पहिलो कुरा हो। फलाम फलाम उत्पादनहरु लाई ह्यान्डलिंग को समयमा ध्यान संग संभाला हुनु पर्छ; ठाउँ जहाँ गढेको फलाम उत्पादनहरु राखिएको छ ठाउँ हुनु पर्छ जहाँ कडा वस्तुहरु लाई प्राय: छुने छैन; जमिन जहाँ गढेको फलाम उत्पादनहरु राखिएको छ पनि समतल राख्नु पर्छ। रेलिंग स्थापना गर्दा, यो पक्का छ कि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यदि यो अस्थिर हिलाउँछ, यो समय संग फलाम रेलिंग विकृत र फलाम रेलिंग को सेवा जीवन लाई प्रभावित गर्दछ।
२. नियमित धुलो हटाउन।
बाहिरी धूल उडिरहेको छ, दिन प्रति दिन जम्मा हुँदैछ, र तैरिएको धुलो को एक परत फलाम कला सुविधाहरु मा खस्नेछ। यो फलाम कला को रंग र चमक लाई प्रभावित गर्दछ, र तब फलाम कला सुरक्षात्मक फिल्म को क्षति को कारण। तेसैले, बाहिरी गढेको फलाम सुविधाहरु लाई नियमित रूप बाट सफा गर्नु पर्छ, र नरम कपास कपडा सामान्यतया राम्रो छ।
3. नमीमा ध्यान दिनुहोस्।
यदि यो मात्र सामान्य बाहिरी हावा आर्द्रता हो, तपाइँ फलाम बाड़ को जंग प्रतिरोध को आश्वासन आराम गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो कुहिरो छ भने, फलामको काम मा पानी को थोपाहरु लाई पखाल्न को लागी एक सूखी सूती कपडा को उपयोग गर्नुहोस्; यदि यो बरसात छ, पानी को बूँदहरु लाई पखाला पछि पानी पनी रोकियो। हाम्रो देश को धेरै जसो क्षेत्रहरुमा एसिड वर्षा भरीरहेको छ, फलामको काम मा बचेको वर्षा पानी पानी पछि तुरुन्तै पखाल्नु पर्छ।
4. एसिड र क्षार बाट टाढा राख्नुहोस्
एसिड र क्षार फलाम बाड़ को "नम्बर एक हत्यारा" हो। यदि फलामको बाड़ गल्तीले एसिड (जस्तै सल्फ्यूरिक एसिड, सिरका), क्षार (जस्तै मिथाइल क्षार, साबुन पानी, सोडा पानी) संग दाग छ, तुरुन्तै सफा पानी संग धुलो कुल्ला, र त्यसपछि एक सूखी सूती कपडा संग सुक्खा पखाल्नुहोस् ।
5. जंग हटाउनुहोस्
यदि गढिएको फलामको बाड़ खिया छ, स्यान्डपेपर को उपयोग नगर्नुहोस् यो तपाइँको आफ्नै शर्तहरुमा रेत गर्न को लागी। यदि जंग सानो र उथलो छ, तपाइँ जंग मा इन्जिन तेल मा डुबेको कपास धागा लागू गर्न सक्नुहुन्छ। केहि समय को लागी पर्खनुहोस् र जंग हटाउन कपडा संग पोंछ। यदि जंग फैलिएको छ र भारी भएको छ भने, तपाइँ यसलाई मर्मत गर्न सम्बन्धित प्राविधिकहरुलाई सोध्नु पर्छ।
छोटो मा, जब सम्म तपाइँ रखरखाव को बारे मा सामान्य ज्ञान मास्टर र तपाइँको दैनिक जीवन मा गढेको फलाम बाड़ को रक्षा गर्न को लागी ध्यान दिनुहुन्छ, तपाइँ आफ्नो जीवन को विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँको सावधानी संग चयन गरीएको गहिरो फलाम उत्पादनहरु लाई एक लामो समय को लागी तपाइँ संग बनाउन सक्नुहुन्छ।
सजावटी बाड़, स्ट्याम्पि Post पोस्ट, धातु पाना, बगैचा बार, रेलिंग ट्यूब, फलाम गेट्स सजावटी,